Isihlungi se-PP ezifakwe izincwe zangaphakathi se-Cartridge Abakhiqizi nabaphakeli - I-China PP Izihlungi Zesihlungi Esenziwe Zisetshenziswa
I-Polypropylene Ipholishi Elincane
Ama-cartridge we-Polypropylene wokuhlunga enziwa kahle ukuze asetshenziswe ezinhlelweni zokuhlunga ezibucayi ngaphakathi kokudla, okwenziwa ngamakhemikhali, i-biotech, ubisi, iziphuzo, ukuphuza, i-semiconductor, ukwelashwa kwamanzi nezinye izimboni zenqubo ezifunayo.
I-Spun Bonded Filter Cartridges yakhiwe ngemicu ye-polypropylene eyi-100%. Imicu ihlanganiswe ngokucophelela ndawonye ukuze yenze ubukhulu be-gradient yangempela ukusuka ngaphandle kuye ngaphakathi. Hlunga ama-cartridges ayatholakala ngazo zombili izisekelo futhi ngaphandle kwenguqulo eyinhloko. Isakhiwo esiphakeme sihlala sibalulekile noma ngaphansi kwezimo ezinzima zokusebenza futhi akukho ukufuduka kwabezindaba. Imicu ye-Polypropylene ishaywa ngokuqhubekayo engxenyeni ebunjiwe emaphakathi, ngaphandle kokubopha, izinhlaka noma izinto zokugcoba.
0.45micron pp ulwelwesi ezifincizekile ezifana nesihlungi igobolondo ukwelashwa kwamanzi
I-HFP series cartridges filter filter media is made of thermal-sprayed porous PP fiber ulwelwesi, enikeza ukungcola okukhulu kokubamba umthamo kunama-cartridge ajwayelekile. Ama-pores abo asezingeni eliphezulu aklanyelwe ukuba acole kancane kancane, agweme indawo ye-cartridge ekuvinjelweni nasekwandiseni impilo yenkonzo yama-cartridges.
Izihlungi ze-PP meltblown zenziwe nge-100% PP fiber enhle kakhulu ngokufafaza okushisayo nokuthinta ngaphandle kokunamathela kwamakhemikhali. Imicu ilandelwa ngokukhululekile njengoba imishini ijikeleza, ukwakha isakhiwo sobukhulu obuncane. Isakhiwo sabo esiminyene kancane kancane sifaka umehluko omncane wengcindezi, amandla okubamba ukungcola okuqinile, ukusebenza kahle kwesihlungi, nempilo yesevisi ende. Izihlungi ze-PP meltblown zingaqeda ngempumelelo ukudla okuqinile okumisiwe, izinhlayiya, futhi zivule uketshezi.